Posted by Tranquillus | Sep 18, 2018 | Horumarka shakhsiyeed
Haddii aad tahay hogaamiye kooxeed ama shaqaale, dib-u-heshiinta shaqsiyadeed iyo xirfad-xirfadeed waa shaki la'aan mid ka mid ah yoolalka muddada-dheer. Labadan dhinac waxay ku xiran yihiin isla markaana saameyn ku yeelan karaan midba midka kale ama si xun oo ku xiran xirfaddaada berrinka. Si looga fogaado in la jiido ama la gubo, halkan waa qaar ka mid ah talooyin wax ku ool ah oo lagu heshiin karo labada.
Baro inaad sheegto MAYA
Inta lagu jiro muddada fasaxa ee soo socota, haddii aadan tago oo jaalle ah oo lagu weydiinaya in aad qabato hawlo kale oo aan ahayn in inta badan adaa leh, og odhan jirin. Xaqiiqdii, ma jirto qodob lagugu darayo jadwalkaagii hore. Tani macnaheedu maaha, si kastaba ha ahaatee, dayacidda shaqada kooxeed. Dhammaan waxay ku xiran tahay shaqadaada maalinlaha ah, laakiin waxaa fiican inaad diiddo haddii aad dareentid in codsigaaga saaxiibtinimo aan la fahmin.
Sida aan si joogto ah maqlaan, waxa ay qaadataa celcelis ahaan 8 saacadood oo hurdo ah jirka inuu ka soo kabsado, had iyo jeer isku dayaan in ay ixtiraamaan xilli. Xitaa haddii aad hesho habeen hurdo la'aan sidii maalgelin ah oo dheeraad ah in aad noloshaada xirfadeed, xusuuso in ay yihiin waxtar lahayn haddii aad u daasho si wax ku ool u shaqeeyaan waa. Sii jirkaada iyo maskaxdaada si aad u nasato.
Shaqada ka tag xafiiska
Baro inaad gurigaaga kala soocdo goobta shaqada. Sababta ayaa ah in aad haysato wakhti kasta oo berrito ah si aad u sii wadatid waxa aadan samayn karin maanta. Jooji shaqada ka dib casho ama ka hor intaadan sariirta aadin. Waxay u egtahay inaad ka qaadato shaqo guri guri macallinkaada subaxda xigta marka aysan run ahaantii ahayn.
READ Sidee dib loogu soo ceshan karaa dhiirigelintaada kadib xilliga adag?
Haddii aad runtii u baahan tahay inaad sii wadato, waxaad doorbideysaa inaad joogtid nus saac ka dib miiskaaga. Haddii kale, ka fogow inaad jilicsanaysid inaad akhrido emaylkaaga ama aad hubiso shaqadaada adiga oo furaya laptop ganacsi. Waxaad ka bixin kartaa faylashaada iyo kombiyuutarkaaga xafiiskaaga. Sii kordhin xirfadahaaga iyo urur fiican.
Jadwalka hawlaha shaqada ka baxsan
Haddii ay tahay fadhiga Yoga, ama saacad dhaqdhaqaaq jirka ah ee jimicsiga, dhammaan siyaabaha aad u fali kartaa waa fiican yihiin. Tani waxay si gaar ah u tahay haddii ay wax ku kordhiso horumarkaaga shakhsi ahaaneed. Tusaale ahaan, fiidka la dhigo asxaabtaada, gabow ama cusub, wax walba waa inay awoodaan inay hagaajiyaan raaxadaada nolol maalmeedka. Qaadashada habeenkii taleefishinka horteeda waxaa ku jira qoyskiisa sidoo kale waa hab fiican oo lagu nasto.
Way adag tahay in la joogo diiradda ama marwalba qaabka ugu fiican laga bilaabo subaxa ilaa habeenkii oo aan la joojin. Kuwani waxay kuu oggolaanayaan inaad is dejiso, qaadato wakhti aad ku cuni karto miro, biyo cabo ama aad u baxdo si aad u hesho hawo cusub. Hadafku waa inaad ka careysiisaa kombiyuutarkaaga, macaamiishaada ama gorgortan aan dhammaad lahayn.
U samee shaqadaada sida waafaqsan nidaamka Pareto
Tani waxay ka dhigan tahay iyadoo kuxiran sida aad u maareyso, 20% howlaha aad qabato waxay ku siin karaan 80% natiijooyinka aad rabto. Hawlahani waa kuwo uqalma sidii istiraatiijiyad ah marba haddii ay leeyihiin qiime sare. Sidaa darteed haddii aad tahay qof subax ah, doorbid inaad ku dhammaystirto 20% this bilowga maalinta oo aad dib u dhigto 80% haray ka dib fasaxa qadada.
READ Maxaad u baahantahay in aad ka baxdo xajka?
Sidoo kale iska ilaali waqtiga wakhti hawlaha ku guuldareysta. Abaabulka shirarka joogtada ahi waxay kaa caawin doonaan inaad joojiso wakhti ku hadalka mawduucyada iyo fikradaha ugu muhiimsan. Isticmaal warar toddobaadle ah ama isgaadhsiin kale oo gudaha ah si aad uga fogaato inaad tagto shirarka shirkada oo dhan Samee waxa aad awoodid si aad uga faa'iideysato dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay shaqadaada.
Talooyinkani waxay kuu oggolaanayaan inaad dhammeysid hawlaha maalintii hore oo aad horay u sii socotid, taas oo ah caddayn ku filan. Had iyo jeer waxaanu helnaa nabadgelyo dheeraad ah markii diiwaankayagu uu yahay mid taariikhda la socda.
Ha ka waaban inaad weydiiso saaxiib si talo ah
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa, sababta aad naftaada u diidi laheyd, weydiiso talo ku saabsan mawduuca mid ka mid ah qaraabadaada oo si muuqata u muuqda in ay muujinayso isku dheelitir ka dhexaysa shaqadiisa iyo noloshiisa xirfaddiisa. Way ka fiican tahay in lagula taliyo qof qalaad ah oo aan waxba ka aqoon noloshaada oo adeegyadeeda lagu soo dallaci karo qiimo sare.
Waqti sii naftaada si aad u jebiso jadwal maalmeedka oo aad qaadato maalmo fasax ah. Qaado fursada aad u habeysey safar dhaqameed ama qalaad sida aad u aragto taam. Sidoo kale qaado fursaddan si aad u booqato qoyskaaga si aad uhesho ama saaxiibo fog. Si kale haddii loo dhigo, waa waqtiga ugu fiican ee lagu dhammeynayo mashaariicda aad caadiyan gaari weydo.
Haddii bixitaanka isla markiiba aysan suurta gal ahayn, ogow inaad usbuuc dhammaadkaaga usbuuc ku kordhiso inay faa'iido u leedahay sida toddobaad fasax ah. Intaa waxaa dheer, dhowr hawlo madadaalo ah ayaa la qaban karaa inta lagu jiro 3dan maalmood ee nasashada.
Masuulka qaar ka mid ah hawlahaaga
Sii tababarahaaga ama mid ka mid ah asxaabtaada fursad ay ku kordhiyaan xirfadahooda iyo aqoontooda iyaga oo tababaraya oo u xilsaaraya hawlo dhawr ah. Dhinaca kale, si aad u maamusho qof kaa caawiya hawlaha qaarkood waxay tilmaamayaan dabagal fiican oo ku saabsan fulinta shaqada la codsaday. Shaqo xun oo ay sameeyaan qof u maleynaya in lagu tababaray adiga lagama yaabo inaad leedahay cawaaqib.
Waxaa laga yaabaa in ay suurtogal tahay haddii ay kugu haboon in ay ka doodaan si maalmood qaar ka mid ah qayb ka mid ah shaqada guriga ka dhigi, la siiyaa kooxda arko cillado lahayn. Nidaamkan shaqada ayaa faa'iido leh haddii aad rabto inaad waqti badan ku qaadatid guriga. Hase yeeshee, hawlaha ganacsigu ma xaddidaan maqnaanshaha jireed, waa inaad hubisaa in wax walba si fiican u socdaan.
Ragga iyo dumarkuba si isku mid ah ayey u raadiyaan isku dheelitirnaan kaamil ah nolosha shaqsiyadeed iyo tan xirfadeed. Waa suurtagal in la maareeyo shaqadiisa iyo nolosha qoyskiisa, hase yeeshee waqtiyada qaarkood xulashooyinka waa in la sameeyaa. Sidaas darteed waa inaad mudnaanta siisaa dhinaca qoyska adoo waxyar u shaqeynaya, tusaale ahaan, si aad in yar ugu daryeesho noloshaada shaqsiyadeed. Ama waxaad waqti dheeraad ah u huri doontaa mihnaddaada xirfadeed adoo wax yar iska siinaya noloshaada shaqsiyadeed. Si kastaba ha noqotee, way fiicantahay haddii xulashooyinkaasi ay yihiin natiijada milicsiga halkii lagugu amri lahaa xaalad aan la maarayn karin.
Raadi isku dheelitirka u dhexeeya nolol shakhsi iyo xirfad leh Nofeembar 25th, 2018Tranquillus
socdaSidee loogu qancin karaa goob shaqo?